Wafti QM katirsan oo balanqaaday dardar galinta shaqooyinka isbitaalka guud ee Kismaayo – Radio Daljir
Oktoobar 23, 2012 5:31 b 0
Kismaayo, Oct 23 , Saraakiil katirsan QM oo shalay booqday magaalada Kismaayo ayaa balanqaaday inay ka qaybqaadanayaan dib usoo celinta adeegyadii bulshada ee magaalada Kismaayo.
Waftiga QM oo ay wehliyeen xubno katirsan hay’adda horumarinta barnaamijyada ee UNDP ayaa kormeeray isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo iyo goobo kalle.
Gaashaanle sare Daahir Xuseen Budul oo ka mid ah saraakiisha ciidamada militeriga dowladda Soomaaliya ee magaalada Kismaayo ayaa waraysi uu siiyay radio Daljir sheegay wafdiga inay dawooyin soo gaarsiiyeen isbitaalka magaalada Kismaayo, islamarkaana ay balanqaadeen kaalmo dheeraad oo dawo iyo dhaqaatiir isugu jirta.
Isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ayaa tan iyo markii ay bilowdeen gulufkii colaadeed ee dhexmaray ciidamada huwanta iyo maamulkii Al-Shabaab ee magaaladaasi ka ariminayay waxaa dhaqaatiirtii isbitaalka ay ka mid noqdeen dadkii colaadaha magaaladaasi ka barakacay.
Xiligaan oo ay magaalada maamulaan ciidamada huwanta ayaa waxaa magaalada ka dilaacay cuduro uu ka mid ah yahay cudurka shubanbiyoodka oo dad ay ku jiraan ciidamo dowladda katirsanaa ay u dhinteen.
Qabanqaabada xuska maalinta Af-ka Hooyo oo ka socota Puntland, xilli shalay laga xusay gobollada qaar.